Xinhua Myanmar - အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအားလုံး မေ ၁ ရက်မှစ၍ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခွင့်ရရှိမည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွမ်ဘိုင်းမြို့ ဆေးရုံတစ်ရုံရှိ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသော စင်တာအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း သရုပ်ပြနေသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Str/Xinhua) Asia
ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း၏ အဆင့်-၃ ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း အဆင့်-၁ ကို ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ထမ်းများ (HCWs) နှင့် ရှေ့တန်းမှ ဝန်ထမ်းများ (FLWs) ကို ဦးစားပေးထိုးနှံပေးခဲ့ပြီး အဆင့်-၂ တွင်မူ မတ် ၁ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ကာ အသက် ၄၅ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများကို ဆေးထိုးနှံပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အား ဝန်ကြီးချုပ် နာရန်ဒြာမိုဒီ သဘာပတိအဖြစ် ကျင်းပခဲ့သော အစည်းအဝေး၌ ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရအနေဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား မြောက်များစွာ အချိန်တိုတိုနှင့် ကာကွယ်ဆေးရရှိနိုင်ရန် အပြင်းအထန်ကြိုးစားလျက်ရှိကြောင်း မိုဒီက ပြောခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဧပြီ ၁၉ ရက်၌ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသူအသစ် ၂၇၃,၈၁၀ ရှိလာခဲ့ရာ စုစုပေါင်းရောဂါဖြစ်ပွားသူဦးရေ ၁၅,၀၆၁,၉၁၉ ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-04-20 00:19:15|Editor: huaxia
NEW DELHI, April 19 (Xinhua) -- All persons aged 18 years and above will be eligible to get COVID-19 vaccination with effect from May 1, India's federal government said on Monday.
With an increase of 273,810 new cases on Monday, India's COVID-19 tally has reached 15,061,919, according to data from the health ministry. Enditem
Previous Article သင်္ဘောသား ၅၀ ကျော်လိုက်ပါသွားသည့် အင်ဒိုနီးရှားရေငုပ်သင်္ဘောနစ်မြုပ်ပျောက်ဆုံးနေ
Next Article ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ကြောင့် တစ်ရက်အတွင်း သေဆုံးမှု အများဆုံးဖြင့် ၁၀၂ ဦးရှိ